E-payment system ကို ပထမဦးစားပေး အမြန်ဆုံးအကောင်ထည်ဖော်မည့် YRTA
YRTA ဟာလာမယ့် ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘဏ္ဍနှစ်မှာ E-payment system ကို ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်မှာဖြစ်ပြီး တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီကလည်း လိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကို မှာယူထားပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ စနစ်စတင်တဲ့အခါမှာလည်း ငွေသေတ္တာပုံးစနစ်ကို အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆက်လက်အသုံးပြုသွားဦးမှာပါလို့ ဆိုတာပါ။
"YBS ယာဉ်လိုင်းတွေမှာ ငွေပုံးစနစ်အစား ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးတွေရဲ့ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ကဒ်နဲ့ ယာဉ်စီးခပေးချေမှုစနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဟာ YRTA ရဲ့ နံပါတ်တစ်ဦးစားပေးစီမံကိန်းဖြစ်တယ်။ စီမံကိန်းကို ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်သွားမှာပါ။ အခုလက်ရှိမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရပိုင် Yangon Payment Services Co.,Ltd. နဲ့ Yangon Payment Services (YPS) Payment System Project Tender အောင်မြင်ထားတဲ့ Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd. တို့ကြား service-level agreement လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd. အနေနဲ့ကလည်း လိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကို မှာယူထားပြီးပါပြီ။ Service-level agreement အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကိုလည်း ဥပဒေချုပ်ရုံးကို အချက်အလက်တွေပေးပို့ထားပါတယ်။ E-payment စနစ်စတင်ရင်လည်း YCDC နဲ့ FMIDecaux တို့ ပူးပေါင်းပြီးအဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့ bus stops တွေမှာ ကဒ်အရောင်းဌာနတွေကို ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသွားဖို့ ရန်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ ယာဉ်တစ်စီးကို စက် ၂ လုံးထားသွားမှာပါ။ ကားပေါ်တက်တက်ချင်း ခရီးသည်က ကဒ်တစ်ချက်ဖြတ်ပြီး register လုပ်ရမယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းရင်လည်း ကဒ်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖြတ်ပြီး ခရီးသည်စီးနင်းခဲ့တဲ့ အကွာအဝေးပေါ်မူတည်ကာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယာဉ်စီးခကို နည်းပညာအရဖြတ်တောက်သွားမှာပါ။" ဟု YRTA ရဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလှအောင်က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် E-payment system စတင်ချိန် လူထုကြားထဲ ကဒ်မပျံ့နှံ့သေးခင်မှာတော့ ငွေပုံးစနစ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆက်လက်ထားရှိသွားမှာဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါငွေပုံးစနစ်အပေါ်မှာလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး စနစ်သစ်တစ်ခုသတ်မှတ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
E-payment system အတွက် Yangon Payment Services Co.,Ltd. နဲ့ Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd. တို့ကြား master agreement သဘောတူစာချုပ်ကို ၂ဝ၁၉ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကာ အဆိုပါ လက်မှတ်ရေးထိုးချိန်ကနေစပြီး ၉ လအတွင်း Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd. က YBS ယာဉ်အစီးရေ ၄,ဝဝဝ ကို ၂,ဝဝဝ စီခွဲကာ လိုအပ်တဲ့စက်ကိရိယာတွေကိုတပ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကနဦးတပ်ဆင်ထားတဲ့ ယာဉ်အစီးရေ ၂,ဝဝဝ မှာ E-payment စနစ်နဲ့ ယာဉ်စီးခပေးချေမှုစနစ်ကို ၆ လအတွင်း ခရီးသွားပြည်သူတွေ စတင်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
YBS ယာဉ်မောင်းသူများ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် နည်းပညာအသုံးပြု smart cards များထုတ်ပေးသွားမည်